ကိုယ့်ရဲ့ Social Media ပေါ်က ဓာတ်ပုံတွေကို ဆန်းသစ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ? - YOYARLAY Digital Media and News
Social Media ပေါ်က သင့်ရဲ့ facebook, Instagram စတဲ့ accountတွေကို အမြင်ဆန်းအောင်လုပ်ဖို့စိတ်ကူးရှိပါသလား? အဲ့တာဆိုရင်တော့ ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ လုပ်သင့်တာက လူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားခြင်းကို ခံရဖို့ ဓာတ်ပုံကောင်းကောင်းလေးတွေ တင်တာနဲ့ စတင်သင့်ပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတက်နေတဲ့ ဒီကနေ့ ကမ္ဘာကြီးမှာအမိုက်စားဓာတ်ပုံတွေရဖို့အတွက် သင်ဟာ ကျွမ်းကျင်အဆင့် ဓာတ်ပုံဆရာတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မလို သလို တန်ဖိုးကြီး ကင်မရာတွေရှိဖို့လဲ မလိုအပ်ပါဘူး။ အခုကျွန်တော်ပြောပြသွားမယ့် အချက်လေးတွေ က သင့်ရဲ့ facebook နဲ့ Instagram ကို အချိန်တိုလေးအတွင်းမှာ ထူးခြားသွားအောင် လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်။
၁။ ဆန်းသစ်တဲ့အမြင်၊ စိတ်ကူးစိတ်သန်းများဖြင့် ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဖြစ်အောင် ဖန်တီးလိုက်ပါ
ဓာတ်ပုံနဲ့ ပတ်သက်လာပြီဆိုရင် ကိုယ် focus ထားချင်တဲ့အရာတွေ၊ ကိုယ် message ပေးချင်တဲ့ အရာတွေကို ပြနိုင်ဖို့၊ ဓာတ်ပုံအချိူးအစားတွေ မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြတ်တတ်ဖို့ဆိုတာ တော်တော်လေးကို အရေးကြီးပါတယ်။ မိုဘိုင်းလ် ဟန်းဆက် အများစုဟာ ဓာတ်ပုံတွေကို Pro တစ်ယောက်လို ပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက် editing features တွေကိုလဲ ထည့်သွင်းလာခဲ့ကြတယ်။ ဥပမာ Vivo က နောက်ဆုံးထွက်ရှိထားတဲ့ V15 Pro မှာဆို ကင်မရာရဲ့ AI features တွေထဲက AI Smart Framing feature က သင့်ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်ကောင်းအောင် ပြင်ပေးပါတယ်။ တော်တော်လေးကို သဘောကျစရာ ကောင်းတဲ့ feature လေးတစ်ခုပေါ့။
AI Smart Framing feature က photo editor တစ်ယောက်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုပါပဲ။ သင့်ဓာတ်ပုံရဲ့ subject ကိုအလွယ်တကူ သိနိုင်သလို၊ အလိုလျောက် edit ပြီး frameပြန်ပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။ အဲ့တာကြောင့် အစားအသောက်ပုံဖြစ်စေ၊ ရှုခင်းပုံတွေဖြစ်စေ၊လူပုံတွေဖြစ်စေ အဓိက subjectကို ထင်ရှားစေသလို၊ အရောင်တွေကိုလဲ ပိုတောက်ပြီး စိုပြေစေပါတယ်။
၂။ အလင်းအမှောင်ဆိုတာ အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအခုဖြစ်လို့ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်
Golden hour ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဓာတ်ပုံဆရာတွေအတွက်တော့ ရွှေလို အဖိုးတန်တဲ့ အချိန်လေးပေါ့။ ဒါပေမယ့် ဘယ်အချိန်လဲဆိုတာကိုရော အတိအကျ သိကြသလားဗျ။ အလွယ်ကူဆုံး နဲ့ မြင်အောင်ပြောရမယ်ဆိုရင် နေက မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းနဲ့ အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့အချိန်၊ နေမထွက်ခင် တစ်နာရီ နဲ့ နေမဝင်ခင် တစ်နာရီ ကို ခေါ်တာပါ။ အဲ့ဒီ တစ်နာရီဆိုတဲ့ အချိန်လေးဟာ သိပ်ကိုလှပတဲ့ ပန်းချီကားဆန်ဆန် ဓာတ်ပုံတွေကို ဓာတ်ဖမ်းလို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။
အဲ့ golden hour အတွက် အချိန်မရှိဘူးလား? ကိစ္စမရှိပါဘူး အခုနောက်ပိုင်းထွက်ရှိလာတဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတွေမှာ Portrait mode ဆိုတဲ့ feature ပါဝင်လာပါပြီ။ သာမာန်အလင်းရောင်အောက်မှာတောင် ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ဓာတ်ပုံတွေကို ဖန်တီးပေးပါလိမ့်မယ်။ Portrait Mode မှာ အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှှုက AI စွမ်းဆောင်ရည်တွေပါ။ ဥပမာထပ်ပေးရရင် V15 Pro ရဲ့ AI Portrait Lighting feature မှာ ရွေးခြယ်စရာ lighting effect တွေ များစွာပါလို့ selfie ပုံတွေကို လှလှလေးထွက်စေပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AI Super Night Mode ကလဲ ညအမှောင်တွေ၊ အလင်းရောင်သိပ်မကောင်းတဲ့ အခြေအနေမျိူးမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ ဝါးနေတာမျိူး၊ မကြည်လင် မပြတ်သားတဲ့ အချိန်မှာတောင် မတူညီကွဲပြားတဲ့ ဓာတ်ပုံများစွာကို တစ်ချိန်ထဲ ရိုက်ယူပေါင်းစပ်လိုက်ပြီး အကြည်လင်ဆုံး နဲ့ အလင်းရောင်အားအကောင်းဆုံး ဓာတ်ပုံတစ်ပုံ ပြန်ထုတ်ပေးတယ်ဗျ။
၃။ ဓာတ်ပုံတွေ ပြင်တဲ့အခါ အလွန်အကျွံမဖြစ်ဖို့ကိုလဲ သတိထားဖို့ လိုအပ်တယ်
ကျွန်တော်တို့တွေဟာ facebook၊ Instagram စတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ် ဓာတ်ပုံတွေ မတင်ခင် ပုံလေးတွေ ကြည့်ကောင်းနေအောင် ပြင်လေ့ရှိကြတယ်။ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ပိုပြီးအသက်ဝင်လာအောင် filters တွေ၊ stickers တွေ၊ animated GIFs လေးတွေလည်း သုံးလေ့ရှိကြတယ်။ ဒါပေမယ့် အတတ်ကြူး အရူးဖြစ် ဆိုသလို တအားကြီးပြင်လွန်းရင်လဲ မကောင်းပြန်ဘူး။ မကြာသေးခင်က social media တွေမှာ hashtag #nofilter နဲ့ campaign လေးတစ်ခု နာမည်ကြီးခဲ့ပါသေးတယ်။ ဒီ campaign လေးရဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ ဓာတ်ပုံတွေကို မပြုပြင်ပဲနဲ့လည်း လူတိုင်းက သဘာဝအတိုင်းလေးလည်း လှပါတယ်ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ချ်ကို ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း ဓာတ်ပုံဆရာတွေတောင်မှ သူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုကြည့်ကောင်းဖို့အတွက် edit လုပ်ကြရပါတယ်။ edit ပြီးတဲ့အခါ ဓာတ်ပုံက သိသိသာသာပိုကောင်းသွားတာ သတိထားမိမှာပါ။ တကယ်လို့ သင်က edit အပိုင်းကို မကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ ပုံရဖို့အတွက် filters သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကင်မရာက effect presets တွေကို သုံးတာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးလို့ရပါတယ်။ ဒီမှာ မှတ်ထားရမှာ တစ်ချက်က filter တစ်ခုတည်းနဲ့ ဓာတ်ပုံတွေအားလုံးကို အမိုက်စားဖြစ်အောင် ပြင်လို့မရနိုင်ပါဘူး။ ဓာတ်ပုံတွေကို ပိုထင်ရှားအောင် ပြင်ဖို့အတွက် exposure, contrast, brightness စတဲ့ setting တွေလည်း လိုအပ်သေးတယ်ဗျ။
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ပျော်ပါးပါး ရုပ်ပြောင်ဓာတ်ပုံလေးတွေ လုပ်လို့ရမယ့် feature လဲရှိသေးတယ်။ Vivo V15 Pro ရဲ့ AI Body Shaping feature က ဓာတ်ပုံတွေ ဗီဒီယိုတွေမှာတောင် သင့် ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းအချို့ကိုလဲ ပြေပြစ်အောင် ပြင်လို့ရသေးတယ်ဗျ။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံ edit မလုပ်မိဖို့တော့ သတိထားရမယ်။
ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေက သင့် social media ကို အပြောင်းအလဲ ဖြစ်စေမှာပါ။ အကောင်းဆုံးကတော့ ပုံမှန်လေး လေ့ကျင့်နေဖို့ပါပဲ။ ဖုန်းကင်မရာမှာပါတဲ့ features တွေ၊ setting တွေကို စမ်းကြည့်မယ်၊ ကလိကြည့်မယ်ဆိုရင် ဘယ်ဟာက ကိုယ့်အတွက် အဆင်ပြေမလဲဆိုတာ သိလာပါလိမ့်မယ်။
Previous Previous post: Vietjet လေကြောင်းလိုင်းရဲ့ သုညကျပ် လေယာဉ်လက်မှတ်နဲ့အတူ အာရှတစ်လွှားဆီ အပန်းဖြေခရီး ထွက်ကြမယ်
Next Next post: မျက်နှာလေး Glow ချင်တဲ့ ပျိုမေတွေအတွက် အလွယ်ဆုံးဘတ်ဂျက်နည်းလမ်း (၇) ခု